Ukusetshenziswa kukakhisi wobisi lwe-pancreatitis > Ukwelashwa okuhlukile
Ngingakwazi ukuthatha ubisi lwamakhanse pancreatitis?
Ukwelashwa kwama-pancreas ngamakhambi esintu kusebenza kahle. Akunakubhekwa njengokuyisisekelo, kepha ama-gastroenterologists ancoma ama-gastroenterologists njengezinyathelo ezingezekile. I-ubisi thistle isetshenziswa kabanzi i-pancreatitis. Lesi sitshalo sinomphumela onenzuzo kuwo wonke umkhondo wokugaya ukudla.
Izici eziwusizo zesitshalo
Isitshalo esisetshenziswa ngenxa yokuqukethwe kwengqimba yezakhi zokulandela umkhondo namavithamini awusizo emgudwini wokugaya ukudla.
Isakhi saso esiyinhloko silymarin. Into inezakhiwo ezisebenzayo ezilandelayo:
Ngaphezu kwe-silymarin, ubisi thistle liqukethe i-iron, i-magnesium, amavithamini e-B, ama-amino acid, ne-quercetin. Umphumela omuhle wezakhi emzimbeni usetshenziswa ngentshiseko odokotela ukwelapha izifo ezahlukahlukene.
Isetshenziselwa i-pancreatitis nezinye izifo zepancreas kaningi kune-hepatitis. Kepha izakhiwo zalo eziwusizo zingasithuthukisa kakhulu isimo sesiguli, zinciphise ingozi yokuqhuma.
Ukusebenza ngempumelelo kwe-pancreatitis therapy kungenxa:
amandla okukhulisa ukuvuselelwa kweseli kwe-pancreatic,
ukusebenza ngempumelelo kwe-choleretic
izakhiwo zokukhishwa emzimbeni
ukugqugquzela ukukhiqizwa kwama-enzymes namahomoni, kufaka phakathi i-insulin,
ukucindezelwa kwenqubo yokuvuvukala,
Iningi leziguli liyazi ukuthi i-thistle yobisi isetshenziselwa ukwelapha i-hepatitis. Ngakho-ke, iziguli zizibuza ukuthi ngabe ithatha ubisi lungathathwa kanjani ngenxa yesifo se-pancreatitis. Isitshalo sinomphumela onomsoco esibindini ngesigaxa senyongo nakuma-pancreas. Isici sayo esikhulu isenzo sokuhlanzwa. I-pancreas ekhanyayo ibangela ukunqwabelana kobuthi isitshalo esingakwazi ukubhekana naso kalula.
Njengokwelashwa okwengeziwe kwe-pancreatitis, ubisi lwamakhambi lusebenza kakhulu. Akusizi ngalutho ukuthi ubisi lwethanga - isihlobo esiseduze kakhulu sobhonsi olubonakalayo.
Thistle lobisi lusebenza kahle, ngakho-ke lusetshenziselwa ukukhipha i-pancreatitis, kanye nangesikhathi sokuxolelwa. Kunokuphikisana okuningana okusetshenziselwa:
ukwanda kwe-cholecystitis engabalwa,
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12,
Akunconyelwe ukwelashwa ngabantu abanokuphazamiseka okuvamile kohlelo lwezinzwa, isithuthwane. Kuzo zonke lezi zimo, ekwelapheni ama-pancreas, kungcono ukubuyisela okunye ngemithi yamakhambi.
Ungayisebenzisa kanjani ngokwelashwa
Umphumela onenzuzo wezinto zomzimba uyabonakala lapho uthathwa nganoma yiluphi uhlobo lomthamo:
Okungcono kakhulu ukuthatha ubisi thistle ukwelapha amanyikwe kuncike esigabeni sesifo. Ukwelashwa nje kuphela kuyasebenza lapho kuthathwa ubisi lwebele okungenani izinsuku eziyi-10. Kepha umuntu akakwazi ukuphuza isikhathi eside, kuthathwa ikhefu okungenani lenyanga.
Ubisi thistle pancreatitis isidlo
Isidlo sisetshenziswa ngendlela engapheli yesifo, ehamba phambili ngesikhathi sokuxolelwa. Isidlo i-powder eyenziwe ngembewu yomile yesitshalo. Thatha isipuni ngaphambi kokudla. Kusebenza kakhulu ukuhlafuna i-powder, bese uphuza amanzi amaningi. Kungezwe futhi njengokufakelwa kokudla. Ayikho inkambo eqinile yokwelashwa - isidlo sisetshenziswa isikhathi eside.
Amafutha obisi lwamakhambi anconyelwa isiguli nge-pancreatitis engamahlalakhona ngaphandle kokukhulisa. Leli thuluzi lisetshenziswa ngokuqinile kwezokwelapha ekwelapheni iziguli ngokuqunjelwa. Amafutha anomthelela omnene we-laxative. Ukwelapha i-pancreas, bayiphuza isipuni ngaphambi kokudla. Ngokuphikisana nesizinda se-pancreatitis engapheli, inkambo yokusebenzisa uwoyela iyizinyanga eziyi-1.5-2, bese kunconywa ukuthatha ikhefu lezinyanga ezintathu.
Kuyelulekwa ukuthenga uwoyela ngamakhemisi. Amafutha acindezelwe obandayo anezinto zokupholisa, kufanele zigcinwe endaweni emnyama, zivikelwe ekukhanyeni.
Ukufakwa kwamaqabunga neziqu
Ukuze isetshenziswe ekhaya, ukusetshenziswa kwethanga lobisi kungenzeka ngesimo sotshani obomile noma izimpande. Ama-decoction kanye ne-infusions alungiselelwe kusuka kubo.
Impande yesitshalo ichotshoziwe, itiye liyabhulwa kulo. Isiphuzo sithathwa kanye ngosuku ngaphambi kokudla, phuza u-200 ml.
Ukumiliselwa kulungiselelwe kusuka kumacembe omile. Ukuze wenze lokhu, nquma amaqabunga, yenza amanzi abilayo. Ithuluzi lishelwa okungenani amahora ayi-12. Ngemuva kwalokho ingilazi yokufakwa idakiwe usuku lonke.
Ama-decoctions we-herbal asetshenziswa ngesikhathi sesifo esande kakhulu. Kulesi simo, inkambo yokwelashwa iyizinsuku eziyi-7-10. Futhi, leli thuluzi liyasetshenziswa ekwelapheni i-pancreatitis ekuxolelweni. Isikhathi sokwamukelwa siyizinyanga eziyi-1.5-2.
Imikhiqizo yobisi thistle isetshenziswa kabanzi emithini yesintu ukwelapha isibindi, i-gallder, i-pancreas. Lesi sitshalo umuthi umuthi omuhle kakhulu we-pancreatitis, kokubili oyingozi futhi ongamahlalakhona. Kepha into yokuqala eyimfuneko yokusebenzisa ubisi thistle yiyona ndlela yokwelapha esemqoka ngemithi.
Izakhiwo eziwusizo ze-pancreatitis
I-ubisi thistle ifaka amavithamini - A, B, D, E, ascorbic acid, okuyinkimbinkimbi yezakhi zamaminerali - i-calcium, i-iron, i-zinc, i-chromium, i-selenium, iodine, i-bromine nezinye izinto.
I-Silymarin yinto ekhethekile enepropathi ye-hepatoprotective. Ingxenye igcizelela ukusebenza kwesibindi, ithuthukisa umsebenzi wayo. Imiphumela emihle esimweni sohlelo lokugaya izakhi - amanoni acid, ama-enzyme, ama-flavonoid, i-quercetin.
Ososayensi baphawula ukuthi lesi sitshalo sibizwa kufanele ngokuthi sahlukile, ngoba ukwakheka okunjalo akuvamile kakhulu. Akukho cishe ama-analogues phakathi kwamakhambi okwelapha. I-ubisi thistle lwe-pancreas lusetshenziselwa ukuhlukahluka okuhlukahlukene - isidlo, impande, uwoyela, amaqabunga, imbewu, iziqu, njll.
Ngingakwazi ukuthatha ubisi lwamakhanse pancreatitis? Akunakwenzeka kuphela ukuthi, odokotela bathi, kodwa futhi kuyadingeka. Isitshalo sinemiphumela elandelayo yokwelashwa:
Ngokuqondene nomphumela oqondile kumanyikwe owonakalisiwe, utshani bunomthelela ekubuyiselweni kabusha ngokushesha kwesitho sangaphakathi. Ukwakheka kufaka phakathi ama-enzyme athuthukisa ukugaya ukudla, futhi amaminerali akhuthaza ukwakheka kwama-enzymes awo.
Ukuhlanganiswa kwezakhi ezihlukile kusiza ekwelapheni izifo eziningi zesibindi, kukhulula umzimba wezinto ezinobuthi. Ukukhiqizwa okujwayelekile kwama-enzymes nama-hormone, kufaka phakathi i-insulin, nakho kuyabuyiselwa, okunciphisa kakhulu amathuba okuba nesifo sikashukela.
Ngokuphikisana nesizinda sokuvuvukala kwe-pancreatic, izidakamizwa zamakhambi obisi ziqeda izimpawu ze-pathology, zenze kube lula ukusebenza kwesitho, futhi zinikeze isivikelo esilandelayo emonakalweni ngenxa yomphumela we-immunostimulating.
Izindlela zokusebenzisa ubisi thistle
Ukuthola okuningi esitshalweni, kunconywa ukuthi ulungiselele amakhambi emithi. Ukwelashwa kwe-thistle yobisi kanye nama-pancreas kwenziwa ngezindlela ezihlukile - kusetshenziswa kuphela ubisi lwebhisi noma luhlanganiswe namanye amakhambi.
Uma isiguli sinokuhlaselwa ngamandla kwe-pancreatitis, khona-ke awukwazi ukuphuza imithi yasekhaya. Thistle lobisi lungasetshenziselwa ukukhulisa ifomu lesifo esingalapheki (itiye elihlanganiswe buthaka kuphela), futhi libuye lusetshenziswe njenge-prophylaxis.
Faka isicelo izingxenye ezahlukahlukene zesitshalo. Izimpande zingangezwa kumasaladi. Kudliwa okusha, kubilisiwe noma kubhakwe. Ukwelashwa okuhlukile kululeka ukusetshenziswa kokudla - "okuphakelayo okugxilwe".
Kuthathwa ngaphambi kokudla, kuhlafunwe ngokucophelela. Lokhu kukuvumela ukuthi uthole inombolo ephezulu yezakhi eziwusizo. Ngemuva kwalokho wageza ngamanzi angenalutho. Kufakwe iflishi nembewu yesitshalo ekudleni, itiye lilungiswa ngesisekelo sabo.
Inkambo yokwelashwa kwama-pancreas yizinsuku ezingama-30-60, kuze kube yilapho isimo sesiguli sizinza. Ngemuva kwekhefu lamasonto amabili, ukwelashwa kuyaphindwa. Izifundo zokuvimbela zenziwa izikhathi ezi-4 ngonyaka ngenyanga eyodwa.
Iresiphi ubisi lwamakhambi:
Hlanganisa amaqabunga omisiwe nezimpande ezichotshoziwe zesitshalo ngezilinganiso ezilinganayo. I-isipuni esisodwa sithululela ama-250 ml wamanzi abilayo.
Faka amahora angu-12, ngemuva kokuhlunga.
Umuthi wasekhaya uthathwa kathathu ngosuku ngesisu esingenalutho. Umthamo ngu-70-80 ml ngasikhathi. Inkambo yokwelashwa iyizinyanga eziyi-1-2. Qiniseka ukuthi ulandela ukudla ngesikhathi sokwelashwa.
Itiye lobisi lwamabele: uthele amathisipuni amabili amaqabunga asikiwe ngamanzi abilayo ngevolumu engu-500 ml, ugcizelele imizuzu engama-20. Ukuhlunga. Basebenzisa isiphuzo kuphela ngendlela efudumele, ehlanjululwe ngamanzi: i-100 ml yomhluzi ngama-200 ml wamanzi. Imvamisa yokusetshenziswa izikhathi ezi-3 ngosuku, inkambo yokwelapha yinsuku ezingama-25-30.
Amafutha enziwe ubisi lwe-pancreatitis uyakwazi ukuthatha indawo yokudla eyomile. Umkhiqizo ovela ezinhlanyweni ukhishwa ngokucindezela okubandayo. Uwoyela unomphumela wokuphikisa ukuvuvukala, ngoba umboza izindonga zesisu namanyikwe, ngokulandelana, umthelela wokudla onolunya uyancishiswa.
Kukholelwa ukuthi uwoyela uqukethe inani elikhulu lezinto eziwusizo, uma ziqhathaniswa nempande, isiqu namaqabunga ekhamba lobisi. Sebenzisa amafutha kathathu ngosuku ngaphambi kokudla (imizuzu eyi-10) - isipuni esisodwa ngasinye.
Akunconywa ukwandisa umthamo uwedwa, lokhu kuholela ekucanuzelweni kwenhliziyo kanye nokuqunjelwa.
I-pancreatitis engapheli ku-45% yezithombe zemitholampilo ihambisana namanye ama-pathologies, ngakho-ke ukwelashwa kwama-pancreas obisi akulungele wonke umuntu. Utshani bunokuphikisana okuthile.
Akunakwenzeka ukudla ukudla nebhotela lukakhisi wobisi uma emlandweni wokudangala nokuxhuga, isifuba somoya - lesi sitshalo singavusa ukuphefumula kanzima, ukuphefumula kanzima.
Okunye ukweqa umthetho ukungabekezelelani kwesitshalo. Iziveza njengesiphazamiso sokugaya ukudla, isicanucanu, ukuqhakaza, kanye nokwakhiwa kwgesi. Imiphumela yokungezwani komzimba nayo iyatholakala - ukuqubuka kwesikhumba, ukulunywa, ukuvutha, i-hyperemia (akuvamile ukwenzeka).
Lapho ubona izimpawu ezingezinhle, ukusetshenziswa kwesidakamizwa sasekhaya kuyenqatshwa. Njengomthetho, imiphumela yokuyithatha ihamba yodwa zingakapheli izinsuku ezingama-2-2 ngemuva kokukhanselwa, ukwelashwa okubonakalayo akudingeki.
Awukwazi ukwelashwa ngethanga lobisi kulezi zimo ezilandelayo:
Amaminerali amaningi namavithamini emzimbeni,
Isifo se-Gallstone (isitshalo sinomphumela we-choleretic umphumela, ongavusa ukuhamba kwamatshe).
Iminyaka yezingane kungukuphula umthetho okuhlobene. Izindlela eziningi zokupheka zikhombisa umkhawulo ofinyelela eminyakeni eyi-12. Ngakho-ke, ngaphambi kokunikeza ingane i-decoction / ukumnika noma ngisho netiye, kuyadingeka ukubonana nodokotela wezokwelapha.
I-Ubisi thistle lubhekisela ezitshalweni eziwusizo futhi “ezingenabungozi” ezisiza ukuthuthukisa isimo se-pancreas, yenza inqubo yokugaya ijwayelekile. Thistle wobisi akuyona nje ukwelashwa, kodwa futhi ukuvikela okuhle kwe-pancreatitis engapheli.
Izici eziwusizo zelesi lubisi zichazwe kuvidiyo kule ngxenye.
Umphumela wezinto ezithinta ubisi emzimbeni
Inani eliyinhloko lesitshalo ukwakheka kwalo, elaziswa kakhulu ngomuthi osemthethweni wanamuhla futhi elisetshenziswe kabanzi ekhemisi. I-Ubisi thistle isetshenziselwa ukwenziwa kwama-extracts, uwoyela, izithasiselo, izithasiselo zokudla.
Noma imuphi umuthi onezenzo ezilandelayo:
Isakhi esiyinhloko sokwelapha i-thistle yobisi yi-silymarin. Inezakhiwo ezihlukile:
izindawo zokuvikela ngokumelene nesibindi hhayi kuphela, kodwa nezinye izitho zokugaya.
Ngaphezu kwe-silymarin, ubisi thistle liqukethe ezinye izinto ezingama-200, kufaka phakathi:
Ngaphezu kwalezi zinto, ubisi thistle iqukethe:
amavithamini (A, D, E, F, K),
ama-amino acid (i-tyramine, i-histamine),
ukulandelela izinto (i-bromine, iodine, i-zinc, i-chromium, i-selenium, njll.), ewusizo nge-pancreatitis,
ama-macronutrients (i-iron, i-potassium, i-calcium, i-magnesium),
ama-enzyme akho athuthukisa ukusebenza kwamanyikwe futhi awulethe esigabeni esibi.
Indlela yokusebenza yokwelapha yobisi thistle
Ngenxa yobungako bokwakheka kwayo, i-thistle yobisi isetshenziswa kabanzi kwezokwelapha, kufaka phakathi ukwelashwa kwe-pancreatitis, futhi inomthelela ku:
ukulungisa amaseli alimele
Ukuqedwa kwezinto ezinobuthi emzimbeni,
ukulungiswa kokuhlanganiswa kwe-hormone ngamanyikwe ngesikhathi sokuvuvukala,
ama-enzymes wesitshalo aqhuba inqubo yokumba, futhi amaminerali asiza ama-pancreas ukukhiqiza ama-enzymes akhe,
ngenxa yokujwayelekile kokuhlanganiswa kwe-insulin, ingozi yokuthola isifo sikashukela i-mellitus ehambisana ne-pancreatitis iyancishiswa.
Izinto ezisebenzayo zobisi thistle zisebenza kulolwelwesi lweseli, ukuzivikela ezifweni, kumakhemikhali kumakhemikhali nasemikhiqizweni eyonakalisayo.
Izinhlobo zemithamo yesitshalo
Ukusetshenziswa kukakhisi wobisi ku-pancreatitis kunconyelwa kokubili ekuxolelweni nasekukhuliseni. Ngemuva kokuphathwa kwayo, ukuthethelelwa okuzinzile kwenzeka. Kusetshenziswe ngu:
imbewu eyomiswe kahle, lapho kulungiswa khona isimemezelo nofulawa - isidlo,
amaqabunga nezimpande - ukumnika kwenziwa kubo,
uwoyela ocindezelwe amakhaza.
Ukusetshenziswa kwamaqabunga nezimpande
Amaqabunga neziqu zesitshalo zingumhlabathi futhi futhi zisetshenziswa njengetiye. Kuyadakwa ngaphambi kokudla.
I-infusion ilungiselelwe kusuka kumacembe nezimpande ezomile zomile. Zibekelwe umhlabathi ngamanzi abilayo futhi kugcizelelwa amahora angu-12. Ngemuva kokucindezela, kunconywa ukuphuza inkomishi engu-1/3 ngaphambi kokudla izikhathi ezi-3 ngosuku.
Ubisi thistle uwoyela
Ukudla okwomile kungathatha isikhundla samafutha ukwelapha i-pancreatitis. Kepha kwezinye izimo kungcono ekudleni, uma kukhona izifo ezihambelanayo. Amafutha futhi angathuthukisa umsebenzi wamathumbu - unomphumela ovuthayo. Umphumela wamafutha umncanyana, kukholakala ukuthi isilinganiso esikhulu sezakhi zokwelapha sitholakala emafutheni.
Ekwelapheni i-pancreatitis, kusetshenziswa kuphela uwoyela ocindezelwe amakhaza - ngalokhu kulashwa, zonke izinto zokwelapha zesitshalo zihlala zingashintshiwe.
Amafutha Thistle we-pancreatitis athathwe ku-1 tbsp. l x 3 r / d imizuzu eyi-10 ngaphambi kokudla. Ukuyiphuza izikhathi ezingaphezu kwezintathu akunconywa, ngoba isifo sohudo, isicanucanu, nokuhlanza kungenzeka.
Amafutha enziwe ubisi, ngaphezu kokwelapha i-pathology yezitho zangaphakathi, asetshenziswa ngempumelelo ngaphandle kokushiswa nokulimala okuhlukahlukene nezifo zesikhumba.
Amalungiselelo asekelwe ezitshalweni
Kukhona futhi amafomu ekhemisi enzelwe eyenziwe aqukethe ubisi thistle. Kubandakanya okukhishwa nokukhipha kuwo. Ukulungiselela okuqukethe ubisi lwe-thistle ekhishwe (i-Legalon, i-Silibor, i-Karsil) kunomthelela omncane wokulashwa kwe-pancreatitis kunotshani obumsulwa (obomile noma obusha), kanye nezindlela zemvelo ezingalashwa ngokukhethekile ziletha izinzuzo eziningi.
Umphumela we-thistle yobisi unamandla kangangokuba awusetshenziswa kumalungiselelo emithi.
I-Thistle kunoma yiluphi uhlobo lomthamo ihanjiswa kwizifundo zezinyanga eziyi-1-2. Ngokuyisisekelo, ngemuva kokwelashwa, ukuthethelelwa okuzinzile kutholakala. Ngemuva kwalokhu, kuthathwa ikhefu amasonto ambalwa. Esikhathini esizayo, lesi sitshalo sisetshenziselwa ukuvimbela. Ukwamukelwa kokuzivikela kwenziwa ngokwesikimu inyanga noma inyanga kamuva.
Ngaphandle kokubaluleka okuyingqayizivele nokusebenziseka kwezakhiwo zokwelapha, ubisi lwamakhambi lunokuphambana okungathi sína, kufanele kukhunjulwe futhi kubhekwe lapho kunqunywa:
ukudangala kanye nesithuthwane,
Isifo somoya (bruschial asthma) - ngesikhathi sokulashwa kwesihlungu sobisi, i-dyspnea iba phakathi kwengxenye yamacala,
ukungabekezelelani komuntu ngamunye: kuvame ukungezwani, okuhambisana nokuqhuma kwesikhumba, uhudo, isicanucanu (uma lesi simo sithatha izinsuku ezi-2, udinga ukuyeka ukusithatha),
ngokweqile potassium ne-phosphorus emzimbeni.
Kunezindlela eziningi zokuphambana, ngakho-ke, ngaphambi kokuthatha uthango lobisi, kuyadingeka ukubonana nodokotela futhi, mhlawumbe, ukwenza ezinye izivivinyo, ngoba kunezifo nokuphazamiseka okutholakala kuphela ngemuva kwezindlela ezikhethekile zokuhlolwa.
E-85% yamacala e-pancreatitis, ngemuva kwenkambo ethatha inyanga yonke enobisi lwethosi, kugcizelelwa amandla amahle: i-edema ye-pancreatic iyancipha, ukuyeka kobuhlungu, isifiso sokudla siyavela, nesisindo somzimba siyabuyiselwa.
Ngokusetshenziswa kahle kwesitshalo, izimpawu ze-pancreatitis ngemuva kwenkambo yobisi ziqediwe, isimo sithuthuka kakhulu, futhi ukuthethelelwa okuzinzile kutholakala.
Ubisi Thistle nezakhiwo zalo
Izici eziyisimangaliso zeMilk Thistle bezaziwa isikhathi eside. Lesi sitshalo se-herbaceous spiny esiqhamuka emndenini we-aster ngokwemvelo sikhula eningizimu yeYurophu, amaPyrenees, eNyakatho naseMelika Ephakathi, eBalkan, eBrithani, eNyakatho naseNingizimu Melika, naseCentral Asia. Ububanzi obunjalo obunjalo buhlotshaniswa nobubanzi bokuphendula okuguqukayo kwesitshalo. Iguqulwa ibe yisimo sezulu esomile esishisayo futhi izwakala imnandi ngama-glade amahlathi nanjengesitshalo sokhula kuma-agrocenoses. Ngenxa yalokhu, ingakhula ngisho nakulezo zifunda lapho izimo zemvelo zakhona kungakaze kube kuhle kakhulu.
Ngaphandle, ikhakhasi lobisi libukeka njengokhula olude (kufika kumamitha ayi-1.5) ngezimbali ze-lilac, zigcwalisa izingadi nezingadi zemifino. Lesi sitshalo sihlukile kunkhula ejwayelekile ngesimo nangombala wamaqabunga. Ethangeni lobisi, zikhulu kakhulu. Iphinda iphethini ye-venation, amabala amhlophe adlula emacembe. Abantu bahlobanisa lezi zibala nobisi oluchithekile. Ikhonkolo libuye libe nezindawo zalo zokwelapha, okuthi noma kunjalo, lihlukahluka kakhulu ezimpahleni zobisi, okufanele zibhekwe lapho zizimele zizimele ngezinto zokwakha.
Ngenxa yesidingo sayo njengomuthi, lesi sitshalo sitshalwa ngenkuthalo emazweni ambalwa aseYurophu nase-Asia. E-Russia, i-thistle yobisi itshalwa ikakhulu engxenyeni yayo yase-Europe, kanye naseCaucasus nase Ntshonalanga yeSiberia.
I-ubisi thistle ithuthukisa ukwakheka kwe-bile futhi isiza ukuphuma kwayo emathunjini. Idume njenge-ejenti enamandla ye-hepatoprotective. Ngalesi sizathu, kusetshenziselwa izifo zesibindi, ubende, amanyikwe. Kunconywa kakhulu ukuthatha amalungiselelo alesi sitshalo se-hepatitis yanoma yiluphi uhlobo lwe-genesis, i-cirrhosis yesibindi, kanye nezifo zesinye i-gallder. Impahla ye-antiviral yalesi sitshalo nayo iyafakazelwa.
Ukwakheka kobisi thistle kufaka:
i-silymarin - into enqabile engumkhuseli omkhulu wesibindi,
amavithamini - A, E, D, F, PP, K, iqembu B,
ama-amino acid (i-tyramine ne-histamine),
Ngenxa yalezi zakhiwo, ubisi thistle lisiza ukubuyisela izinqubo eziyisisekelo zomzimba futhi linomphumela ojwayelekile wokupholisa.
Ukusetshenziswa kukakhisi wobisi ku-pancreatitis kusekelwe emandleni alesi sitshalo ukulungisa izicubu ezonakele nokususa ubuthi.
Ngaphezu kwezifo zesibindi namanyikwe, ubisi lwethosi luphatha:
amathumbu (kwandisa ukuhamba kwamathumbu futhi kuvamisa i-microflora yayo),
inhliziyo nemithambo yegazi (ibanikeza ngenani elikhulu le-potassium ne-magnesium),
indlala yegilo (ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-iodine),
izitho zombono (ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini namaminerali),
uhlelo lwezakhi zofuzo
Funda ngezinguquko zokuphamba kumanyikwe nasesibindi lapha.
Ukushintshashintsha kwezimpawu zobisi thistle kukuvumela ukuthi ulisebenzise ukuvikela isifo samathambo, umfutho wegazi ophakeme, ukushaya kwenhliziyo nemivimbo. Ngenxa yokwakheka okuhle kwamaminerali, kungasetjenziswa ekwelapheni i-anemia, isifo sikashukela. Lesi sitshalo sinconyelwa abesifazane ngesikhathi sokuncelisa ibele ukukhuphula i-lactation.
Ngenxa yokujwayelekile kohlelo lokugaya ukudla, ukunciphisa izinga lokudakwa, ukuhlanza umzimba ubuthi futhi ukucebisa ngawo ngamaminerali, i-thistle yobisi ivame ukusetshenziselwa ukulwa nokukhuluphala.
Izinzuzo zokusebenzisa ubisi thistle kwezifo ezihlangene zisuselwa ekubeni khona kwama-flavonoids, ama-flavonolignans, i-zinc ne-manganese ezinhlanyelweni zakhe. Ukuhlanganiswa kwalezi zinto kukuvumela ukuthi umise izinhlungu futhi ukhulule ukuqina kwenkqubo yokuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kwe-zethusi, i-carotenoid ne-Vitamin E kunomthelela ekuqalisweni kwenqubo yokukhiqiza amaprotheni e-fibrillar, aqukethe i-cartilage ye-articular, isikhwama, ulwelwesi kanye nama-ligaments. Ukukhiqizwa kwe-collagen kuvikela umuntu ekukhuleni kwe-osteochondrosis nezinye izifo zomgogodla. Ngenxa yokuba khona kwe-calcium kanye ne-manganese, izicubu zamathambo zivuselela emva kokulimala.
Thistle lobisi lubekelwe abantu abathola izifundo zemisebe ye-radiation kanye ne-chemotherapy, abaye bathola ubuthi, utshwala, i-nicotine kanye nokudakwa kwezidakamizwa, nokuhlinzwa okukhulu. Kuyasiza ukuyithatha ngezikhathi ezithile kubahlali bama-megacities angcolisiwe kanye nabasebenzi bamabhizinisi alimazayo. Inkambo yobisi olubunjiwe kulezi zimo kuhloswe ngalo ukuqeda ubuthi emzimbeni kanye nokuvikela isibindi ekulimaleni.
Ukuthandwa kwethistle lobisi ekwelapheni izifo zesibindi namanyikwe kuhambisana hhayi nokwakheka kwamakhemikhali kuphela. Iqiniso ngukuthi leli thuluzi likuvumela ukuthi ubuyisele ukusebenza kwesibindi. Isibindi esinempilo sivikela umzimba kubuthi, imiphumela yamagciwane, sinikeza ukugaya okuphelele, okunciphisa ingozi yokushoda kwezakhi zomzimba, amavithamini kanye nezinto ezilandelwayo.
Ukuvuvukala kwamanyikwe akugcini ngokunciphisa ukusebenza kwesistimu yokugaya ukudla, kodwa futhi kuguqula nesizinda se-hormonal yomzimba, kudala ingozi yesifo sikashukela. I-ubisi thistle isiza ukubuyisela ubuqotho bezicubu ze-pancreatic futhi ithuthukise imisebenzi yayo njenge-endocrine gland.
Cishe zonke izingxenye zalesi sitshalo zisetshenziselwa ukudla. Izimpande zayo zingatholwa, zibiliswe noma zidliwe zingavuthiwe. Kepha le ngxenye eluhlaza kufanele ifakwe emanzini ngaphambi kokuyisebenzisa ukuze kuqedwe lolu buso olubabayo lwakudala ubisi. Izimbali zingomiswa futhi zisetshenziswe njengokufisa, noma zingadliwa zintsha.
Ngenhloso yokwelapha, imbewu nezimpande zesitshalo ezisetshenziswa kakhulu.
Ikhemisi liketheketolo linikeza abathengi balo uhla oluningi lwamalungiselelo e-thistle yobisi: uwoyela wembewu, ufulawa, isidlo, ukumnika utshwala, itiye le-herbal, isiraphu.
Umthamo ojwayelekile wefulawa noma wokudla: izikhathi ezi-3 ngosuku, isipuni esisodwa ngaphambi kokudla. Umkhiqizo kumele uhlafunwe bese ugezwa ngamanzi. Inkambo yokwelashwa cishe izinyanga ezimbili. Ngenkathi kugcinwa isidingo sokunweba ukwelashwa kwe-thistle yobisi, inkambo iyaphindwa ngemuva kwekhefu lamaviki ama-3-4.
Nge-pancreatitis kanye ne-hepatitis esigabeni esibuhlungu, kanye ne-gastritis ehambisana nesihlungu, kungcono ukuthatha uwoyela we-thistle yobisi. Imboza ulwelwesi lwe-mucous lwesisu futhi isiza ukunciphisa umphumela ocasulayo wanoma yikuphi ukudla ebusweni bezinqubo ezinzima zokuvuvukala. Udinga ukuphuza uwoyela ngaphambi kokudla, kepha hhayi kaningi ngaphezu kwezikhathi ezi-3 ngosuku.
Ngokwengeziwe imbewu, ngezinhloso zokwelapha, ungasebenzisa izimpande ezinamaqabunga. Kufanele zomiswe bese zenhlabathini kube yimpuphu. Udinga ukuthatha i-powder enjalo njenge-infusion. Isipuni sikafulawa sithululelwa ngamanzi abilayo (0.5 l) futhi sigcizelelwa endaweni efudumele cishe amahora ayi-10-12. I-infusion eqediwe iyahlungwa futhi ithathwe 50-80 g izikhathi ezi-3 ngosuku.
Njengoba i-thistle yobisi iqukethe inani elikhulu le-Vitamin E, elibizwa ngokuthi yi-Vitamin yentsha, isetshenziswa ezinqubo zokuhlobisa njenge-scrub.
Contraindication ekwelapheni ubisi thistle
Lesi sitshalo asibalulekile kuphela ezintweni zaso zokwelapha nokunempilo, kodwa futhi neqiniso lokuthi cishe asinaziphikiso.
Akufanele usebenzise lesi sitshalo nge:
ukuphathwa kwezingane ezingaphansi kweminyaka engu-12,
ukukhulelwa ngasiphi isigaba
ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa
i-cholelithiasis, ngoba thistle lobisi linempahla eqinile ye-choleretic, engavusa ukuhamba kwamatshe,
ukwanda kwe-pancreatitis kanye nokuvela kwesidingo sokudla okungu-zero,
i-appendicitis eyingozi (akufanele ihlanganiswe ne-enteritis),
ukweqiwa okuqinisekisiwe kwe-phosphorus ne-potassium emzimbeni.
Lesi sitshalo sithathwa njengewusizo kakhulu futhi singenabungozi kangangokuba ekusetshenzisweni kwayo ngokuvamile asidingi ukunikezwa udokotela okhethekile. Uma isiguli sithatha ezinye izidakamizwa, kuyadingeka ukuxhumanisa ukusetshenziswa kobisi thistle nochwepheshe.
Namuhla, imbiza yobisi njengesitshalo sokwelapha isetshenziswa ngokusemthethweni emazweni amaningi, kufaka phakathi iRussia, futhi konke kubonga ngokwakhiwa kwamakhemikhali okuhle kwesitshalo, isici saso esiyinto ethile engajwayelekile ebizwa ngokuthi silymarin ikwazi ukuvikela isibindi ngokuthembekile emiphumeleni emibi yezinto ezinobuthi emzimbeni.
Ngaphezu kwalokho, imbewu yobisi lwamakhambi ayingxenye yemithi eyaziwayo njengeSilibor, Silimar, Legalon neKarsil. Izidakamizwa ezisohlwini zesigaba se-hepatoprotectors zisetshenziswa njengezisebenzeli ezisebenzayo ekwelapheni ukuvuvukala okubabayo nokungamahlalakhona, i-cirrhosis kanye nokulimala kwesibindi esinobuthi.
Ubisi thistle ku-gynecology
Kwi-gynecology, ubisi thistle luyasetshenziswa ngenxa yokuxineka okuphezulu kwe-Vitamin E esitshalweni, okuqinisekisa ukulawulwa kwezinqubo zokuzala neze-endocrine kwabesilisa nabesifazane. Ngaphezu kwalokho, i-Vitamin E iyi-antioxidant enamandla evimbela ukuthuthukiswa kwezinqubo zesimila. Futhi, i-thistle yobisi ifaka inani elikhulu lamanye amavithamini ancibilikisa amafutha futhi alandele izakhi anomthelela ekuqothulweni kwe-foci yokuvuvukala nokuphulukiswa okusheshayo kwamanxeba nokuguguleka.
Ekwelapheni i-menopausal atrophic vaginitis ephelezelwa ukulunywa, kunconywa ukuthi kudlalwe ngalo uthango lobisi nsuku zonke: ngokwesibonelo, u-3 ml kawoyela ufakwa esithweni sangasese sangasese ebusuku usebenzisa isirinji ngaphandle kwenalithi. Ngemuva kokwethulwa kawoyela, kuyadingeka ukuthi ulale emhlane wakho ngemilenze eguqe emadolweni imizuzu emi-5 kuye kwengu-7. I-Douching yenziwa izinsuku eziyi-12.
Ekwelapheni ukuguguleka komlomo wesibeletho, kanye ne-trichomonias colpitis, kusetshenziswa ikhambi, lapho kulungiswa okufanele kube yi-50 ml kawoyela thistle wamafutha kufanele kuxutshaniswe ne-0.5 tsp. uwoyela wesihlahla. Ingxube ewumphumela wamafutha iyashona ngokwesikimu esingenhla. Inkambo yokwelashwa izinqubo eziyi-12.
Ukudambisa ukuvuvukala futhi uvikele umdlavuza, kunconywa ukuthi uphuze itiye enkombeni yobisi.
Ukulungiswa kokucwilisa ubisi (ikakhulukazi i-oyili) kusetshenziswa kabanzi ku-cosmetology, ngoba lesi sitshalo sicetshisiwe ngenhlanganisela yonke yamavithamini, amaminerali nezinto ezinomphumela omuhle esikhunjeni.
Umphumela wethanga lobisi esikhunjeni:
ukukhuthaza ukuphulukiswa okusheshayo kwamanxeba,
ukuvuselelwa kwezicubu nokuvuselela umzimba,
khuphula imisebenzi yokuvikela isikhumba (sikhuluma ngokuvikela isikhumba ekushayweni, kuqhwa, kanye nemiphumela emibi yemisebe ye-ultraviolet),
ukushesha kwe-microcirculation yegazi ngqo esikhunjeni.
Akumangazi ukuthi amalungiselelo obisi lwamakhambi asetshenziswa kabanzi ekwelapheni:
ukungahambi kahle kwesikhumba,
Ukusetshenziswa njalo kokulungiswa kwesihlakala sobisi kuthuthukisa isimo sesikhumba, kwandise ubusha bayo, impilo nobuhle isikhathi eside.
Kubalulekile! Ukulungiswa kokucwilisa ubisi (ama-decoctions, i-infusions, isidlo kanye ne-powder) kungasetshenziswa nanganoma yiluphi uhlobo lwesikhumba, ngoba lesi sitshalo, ngokungenazimpikiswano, sinomthelela ekungezelweni kwevithamini, ukuvuselelwa kabusha, ukondleka kanye ne-hydration yesikhumba.
Kumele kwaziwe ukuthi namuhla, odokotela abaningi basebenzise ngempumelelo ubisi lwethosi njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi kwezifo zesikhumba, ngoba kuvame ukuba nezinkinga zesikhumba ezikhombisa ukungasebenzi kahle kwesibindi.
Imvamisa imbangela yokubonakala komqubuko kungukuphazamiseka kwe-metabolic nezinkinga ngokusebenza kwesibindi, ngakho-ke lapho ulapha induna, kubalulekile ukuthi ungagcini nje ngokuqeda ukuqubuka uqobo, kodwa futhi nembangela yokubonakala kwayo. Futhi ubisi Thistle kuzosiza kulokhu, ususe ubuthi emzimbeni futhi ejwayelekile imetabolism.
Thistle lobisi lithathwa ngesimo sempuphu eyomile kusuka ezinhlanyelweni zesitshalo, i-1 tsp ngayinye. kathathu ngosuku, wageza ngamanzi afudumele.
Ukudambisa ukuvuvukala, kukhonjiswa izinhlelo ezifudumele ezivela emafutheni obisi lwamanzi: ngokwesibonelo, i-gauze inyunyiswe ngamafutha afudumele bese ifakwa ebusweni imizuzu emi-5 kuye kweli-10 (ungamgcoba ubuso bakho ngamafutha afudumele obisi, osele kwesigamu sehora, emva kwalokho ugezwe ngamanzi afudumele).
Kuyasiza njengokudla kokudla okukhonkotha nobisi kusuka embewini yesitshalo eyomile nechobozekile. Esidlweni, njengamafutha, kukhona izinto eziwusizo ezifaka isandla ekuthuthukiseni isimo sesikhumba.
Ubisi Thistle kusuka amabala yobudala
Imvamisa, izimbangela zamabala wobudala yilezi:
ukwephulwa emsebenzini wezindlala nama-grenads adrenal,
izifo zesibindi nezokuzala
Ubuthi obuhlala isikhathi eside bomzimba ngenxa yokuchayeka kwezifo ezingamahlalakhona, ubuthi, ubuthi, ama-radicals mahhala,
Ukushoda kweVitamin C
isimila sobuchopho (okungukuthi, i-pituitary gland),
ukusetshenziswa isikhathi eside kwemithi ethile.
Ubisi Thistle ulwa ngempumelelo kulezi zizathu ezilandelayo:
ilawula i-adrenal gland kanye nama-gonads ngenxa yamafutha abalulekile aqukethe isitshalo, ama-flavonoids, ama-saponins,
isusa izinto eziyingozi emzimbeni,
kunxephezela ukusweleka kwe-Vitamin C,
iqeda imiphumela emibi yezidakamizwa.
Ingxube yama-thistle obisi namafutha etiye esithelo kuzosiza ukubuyisela ukubukeka okunempilo nokukhangayo esikhunjeni, ukulungiselela lapho udinga i-4 tbsp. isithako sokuqala kanye no-5 ml wesibili. Isikhumba esivuthiwe noma esishisayo sigcotshisiwe ngethuluzi elinjalo kabili ngosuku. Umphumela uzobonakala ngemuva kwamasonto ayi-1.5 - 2.
Kubalulekile! Kunconywa ukwenza ama-masks wokuxubha kusihlwa, ngoba emva kwawo akunakufisa ukuhlala elangeni.
Okuningi emabangeni obudala
Ubisi Thistle lwe-Psoriasis
Ngama-psoriasis, izindwani ezibomvu ezomile, eziphakanyiswe ngaphezu kwesikhumba, zakhiwa esikhunjeni sesiguli. Kulokhu, ukubukeka kwama-plaque kuhambisana nokukhonkotha kwesikhumba nokulunywa kanzima. Ukunciphisa (futhi kwezinye izimo ukuqeda ngokuphelele) ukukhonkotha nokulunywa, ukulungiswa kokukhanywa kobisi, okungasetshenziswa kokubili ngaphandle nangomlomo, usizo.
Ama-phytotherapists amaningi asebenzisa ubisi lwamakhambi e-psoriasis, ngoba ukusebenza kwesibindi kuyanda lapho ukwanda kwesifo.
Njenge-ejenti yangaphandle, kusetshenziswa i-oyisi enziwe ngobisi, okufanele ifakwe amahlandla ama-2 kuye kwayi-3 ngosuku imizuzu engama-30 esikhunjeni esithintekile.
Ukusetshenziswa kwangaphakathi, kukhombisa i-quoction thistle, ethathwa kathathu ngosuku ngenyanga. Ungathatha futhi ubisi thistle powder.
Ngesikhathi sokuvivinywa komtholampilo, kwatholakala ukuthi amaphesenti angama-75 eziguli ezithatha ubisi lwamakhambi obisi phakathi nenyanga ayelaphe cishe ngokuphelele i-psoriasis, kanti amaphesenti angama-25 asele ayenokuxolelwa okukhulu kwalesi sifo.
Ubisi thistle ku-oncology
Amalungiselelo thistle ubisi athole isicelo sawo ekuvimbeleni nasekwelapheni umdlavuza, ngoba lesi sitshalo iyi-antioxidant enamandla ekhipha izinto eziyingozi emzimbeni futhi ibuye ithambise umthelela wazo emzimbeni.
Thistle lobisi lunezinzuzo eziningi ngokuqhathaniswa nokwelashwa kwezidakamizwa:
1. Ivimbela ukuvela kwezimbangela ezinobungozi.
2. Ingasetshenziswa isikhathi eside.
3. Kubonakala ngokungatholakali (noma inani elincane) lemiphumela emibi enobuthi.
4. Inezakhiwo ezengeziwe ezinhle, ngenxa yokuthi inomphumela onenzuzo ekusebenzeni komzimba wonke.
Ngokuthatha njalo amalungiselelo obisi lwamakhandlela, unganciphisa kakhulu ubungozi bomdlavuza. Ngakho-ke, ngenxa yokuba khona kwamavithamini A, C, E, calcium, zinc, selenium ne-folic acid ku-thistle yobisi, ubungozi bokuthola umdlavuza wezitho ezinjalo buncishiswa kakhulu:
Kwaphawuleka ukuthi ukulungiselela ubisi lwamakhambi aqukethe izinto ze-anticancerogenic futhi kwathathwa isikhathi eside kumthamo owenza isidingo sansuku zonke sama-micronutrients kwavusa umoya wokucabanga kwezimo ezinamandla, kanye noshintsho kwezitho ezahlukahlukene. Kubalulekile futhi ukuthi ubisi Thistle lukhulise umphumela omuhle we-chemotherapy.
Kubalulekile! I-Ubisi Thistle akuyona ipaceacea yomdlavuza, kepha yingxenye yezinyathelo ezibanzi zokulwa nalesi sifo esesabekayo, ngakho-ke kufanele unamathele ngokuqinile kwizincomo zikadokotela ukuze ungalimazi umzimba osuvele ubuthakathaka.
I-Ubisi thistle inempahla ekhethekile, ngenxa yokuthi isitshalo singasetshenziswa njenge-ejenti elwa nokwaliwa. Iqiniso ngukuthi ubisi thistle luvimbela ukwakheka kwama-histamines emzimbeni, okuvusa ukubonakaliswa kokungezwani komzimba.
Umphumela onenzuzo esibindini salesi sitshalo nawo ubalulekile, ngoba kaningi yizifo zesibindi ezikhuthaza ukuthuthukiswa komzimba, okuphela lapho nje umsebenzi walesi sitho usuqaliwe. Lapho uthatha isipuni esingaphelelisiwe sobisi thistle powder kathathu ngosuku, izimpawu zokwaliwa zizonyamalala ngenyanga.
Kubalulekile! Lapho uthatha ubisi lwethanga, okuqukethwe kweplatelet egazini kuyakhuphuka, ngakho-ke kuyadingeka ukuthatha ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile ngemuva kwezinsuku eziyi-10 - 15 zokwelashwa, ezizosiza esikhathini esizayo ukulungisa ukugcwala kwemithi efaka lesi sitshalo.
Isibindi singumhluzi wemvelo womzimba womuntu osiza ukususa amakhemikhali ayingozi futhi enze imikhiqizo yobuthi ibe yingozi. Lo mzimba ufihla i-bile, enomthelela ekuwohlokeni kwamafutha ezintweni nasezakhiweni ezitholwa kalula ngumzimba.
Ngaphezu kwalokho, yisibindi esibamba iqhaza kulezi zinqubo ezilandelayo:
ukulawulwa kokwakhiwa kwamaprotheni,
Ukuchithwa kwezinto ezinobuthi ezincibilikisiwe ezinamafutha,
ukuqaliswa kokuqalwa kwegazi.
Ngakho-ke, ukulimala kwesibindi kungabangela ukungasebenzi kahle emzimbeni wonke. Ukuze uvikele isibindi emiphumeleni eyonakalisayo yobuthi nezinye izinto ezingezinhle, kunconywa ukuthatha amalungiselelo obisi lwamakhakhayini, kufaka phakathi i-hepatoprotective ntho silymarin, ebuyisela imisebenzi yesitho.
I-Silymarin, isebenzisana nama-radicals wamahhala, iguqula ibe yizingxube ezinolaka neziphephile, ezivimba ukubhujiswa kwezinhlaka zamaselula.
Ukwelashwa kwe-Hepatitis C
Ukulungiswa kokucwilisa ubisi, okunomphumela onenzuzo esibindini, kusetshenziswa ekwelapheni i-hepatitis C. Kubalulekile ukuqonda ukuthi i-thistle yobisi iyingxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi, hhayi umuthi oyisisekelo. Lesi sitshalo ngempumelelo futhi ngaphandle kokulimaza umzimba sisusa izinto ezinobuthi, ngaleyo ndlela sihlanza isibindi futhi sisivikele ekubhujisweni.
Ngemuva kwe-hepatitis C (kanye nokuvimbelwa kwalesi sifo), kuboniswa itiye kusuka enkomeni yobisi, ukulungiselela ngalo i-1 tsp. imbewu noma izingxenye zomoya zesitshalo zithululelwa ama-250 ml wamanzi abilayo, emva kwalokho umkhiqizo uthululelwa imizuzu engu-15, uhlungiwe kahle futhi uphuze ushisa ngohlobo oluncane. Umuthi onjalo uthathwa inkomishi eyodwa esiswini esingenalutho kabili ngosuku - ekuseni nakusihlwa (ngokushesha ngaphambi kokulala). Ukuze uthuthukise ukunambitheka, i-mint ingangezwa itiye elinjalo.
I-ubisi thistle ine-antioxidant, diuretic, anti-inflammatory and antispasmodic, ngakho-ke isetshenziswa ekwelapheni izifo zezinso.
Umphumela wethanga lobisi ezinso:
isiza ukususa amatshe ezinso
wenza umsebenzi womzimba uguqule,
Hlanza izinso zezinto eziyingozi,
ibuyisela amangqamuzana ezinso
ivikela umzimba emiphumeleni emibi yobuthi, ama-radicals.
Nge-pyelonephritis, kanye nokuvuvukala kwe-bladder (noma i-cystitis), ikhambi lobisi liboniswa njengesibulala magciwane esisebenzayo.
Thistle lobisi liqukethe i-Vitamin K, edingekayo ekusebenzeni okugcwele kwezinso.
I-Ubisi thistle isetshenziswa ekwelapheni i-gallbladder ngenxa ye-silymarin equkethwe kulesi sitshalo, engakwazi ukulungisa ulwelwesi olulimele lwamaseli wesibindi kuphela, kepha futhi ithuthukise izinqubo ze-metabolic kuzo. Ngaphezu kwalokho, i-silymarin ivikela isibindi emiphumeleni yobuthi, imiphumela emibi yezidakamizwa notshwala emzimbeni.
Isenzo esiTholile emgodleni:
ukuqedwa kwe-foci yokuvuvukala,
ukwakheka okwandayo kanye nokuphuma kwe-bile,
ngcono izakhiwo ze-bile,
inqubo ejwayelekile yokugaya kanye nesitulo,
ukususwa komuzwa wobunzima e-hypochondrium,
Ukwenza kube lula ukwakheka kwe-bile,
Kubalulekile! Ubisi thistle umuthi ophansi onobuthi obuphansi onobuthi wemvelaphi yezitshalo, ongazilimazi izitho eziphambili, kanye nezinhlelo zomzimba womuntu.
Kulesi sifo se-gallstone, amatshe akha e-gallbladder uqobo nasezindongeni ze-bile. Isizathu sokwakheka kwamatshe ngamanani amaningi we-cholesterol "eyingozi" nosawoti emzimbeni. Futhi, amatshe ku-bile akhiwa ngenxa yokutheleleka kwephasi elihlanganisiwe, ukuqina kwe-bile, izinguquko ekubunjweni kwamakhemikhali.
Thistle lobisi, olusiza ukuqeda amatshe amancane futhi uwasuse, lubhekana kahle nazo zonke lezi zizathu. Kubalulekile futhi ukuthi amalungiselelo obisi lwamakhakhasi abe nezindawo ezinama-antispasmodic nezama-analgesic, ngenxa yokuthi amatshe aphuma kabuhlungu kakhulu.
Ngokusebenzisa i-decoction ye-thistle yobisi, kungenzeka ukunciphisa kakhulu ukuvuvukala kwe-bile, ukwenza ngcono ukukhiqizwa kanye ne-extretion ye-bile.
30 g yembewu yezitshalo kufanele ithululelwe ku-500 ml wamanzi bese ibekwa ukushisa okuphansi kuze kube yilapho uhhafu we-ketshezi uvele. Ngemuva kwalokho umhluzi uthululelwa eminye imizuzu engu-15 bese uyahluzwa, emva kwalokho kuthathwa isipuni ngehora amahora ayi-12. Ukuphathwa okunjalo kwenziwa okungenani izinsuku eziyi-10 kuye kwezingu-15.
Ngezinjongo zokuvimbela, kubalulekile ukuthatha kabili ngosuku izinyanga eziyi-1 - 1.5 isipuni sembewu yobisi oluyimpuphu, kabili ngosuku.
Okuningi Ngobhubhane lwe-Gallstone
Ubisi thistle ngemuva ukususwa gallbladder
Ezimweni lapho ukwelashwa kwe-gallbladder kunganikeli imiphumela emihle, baphendukela ekususweni kwayo, okuthi emuva kwalokho kuholele ekuphazamisekeni okuhlukahlukene ekusebenzeni kohlelo lokugaya ukudla.
Ngakho-ke, iziguli ngemuva kokuhlinzwa zivame ukukhathazeka:
Ubuhlungu ku-hypochondrium efanele,
ukuqunjelwa (noma izitofu ezingazinzile),
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokungabikho komgogodla, i-bile ingena emathunjini ngokungafanele, ngenxa yalokho ukugaya nokuphonsa kwamafutha kuphazamiseka. Ukulungiselela okhalweni ubisi kusiza ukuqinisa izinqubo zokwakheka kanye nokuqothuka kwe-bile, yenza ngokwezifiso umzimba we-metabolism, futhi kuqede nezimpawu ze-postoperative dyspeptic. Kepha into esemqoka ukuthi ubisi lwamakhakhasi lusiza ukuvimba ukungaboli kwe-bile kanye nokwakhiwa kwamatshe esibindini, okubaluleke kakhulu ngemuva kokuhlinzwa ukususa i-bile.
Thistle yobisi ingathathwa womabili njengekhambi elizimele, futhi njengengxenye yokwelashwa ngamakhambi nezimali zokuvimbela, eyodwa yazo enikezwe ngezansi.
I-Calendula - 100 g
knotweed - 100 g
i-dieelle - 100 g,
i-celandine - 50 g
Thistle ubisi - 50 g
i-rosehip - 200 g.
2 tbsp iqoqo lithululelwa ilitha lamanzi, abilisiwe imizuzu engama-20 futhi afakwa engxenyeni yehora. Ngemuva kwalokho umhluzi uyahlungwa bese uthathwa i-150 ml kane ngosuku, ngaphambi kokudla ukudla. Ukuphathwa okunjalo kwenziwa kungakapheli inyanga.
Ubisi Thistle ngempumelelo futhi ngokuphelele ngokuphepha emzimbeni kanje:
ithuthukisa ukwakheka nokukhipha i-bile (lesi sitshalo sikhuthaza ukugcotshwa kwe-pancreatic kanye ne-gastric),
kususa i-spasm of gallbladder, kanye nepheshana le-biliary,
ulwa namagciwane kanye ne-protozoa ebangela ukuvuvukala kwe-gallbladder,
ichitha amatshe akhona futhi ivimbele ukwakheka okusha,
Kubalulekile! Ukwelashwa kwe-cholecystitis ngobisi lwethistle lobisi kwenziwa isikhathi eside, ngakho-ke akufanele ulindele umphumela osheshayo.
Okuningi mayelana ne-cholecystitis
Isisu, amathumbu, isibindi kanye namanyikwe kuxhumene kakhulu, ngakho-ke, ukuphazamiseka ekusebenzeni komunye wabo kuthinta kabi ukusebenza kwabanye. I-Ubisi thistle isiza ukubuyisela imisebenzi yalezi zitho ngokwenza i-metabolism ifane, ukuvuselelwa kwezicubu nokuqinisa ulwelwesi lwamaseli (ngokwesibonelo, imikhiqizo ye-metabolic ayiqedwa ngokusebenzisa ama-membranes weseli athintekile ngesikhathi, okwenza kube nzima ukondla amaseli).
Isenzo sobisi thistle esiswini:
ukuqedwa kwe-foci yokuvuvukala esiswini,
ukuvuselelwa kabusha kolwelwesi lwe-mucous lwepheshana esiswini,
ukuqedwa kwezibonakaliso ze-dyspeptic.
Ukwelashwa kwesisu esiswini
Ukulungiselela okhalweni ubisi kuvame kakhulu ekwelapheni izilonda zesisu, ngoba ziqukethe ama-acid anamandla anomphumela wokuphikisa ukuvuvukala.
Ngokwemiphumela yocwaningo, lapho uthatha ubisi lwamakhambi obisi, isikhathi sokuphulukiswa kwezilonda zesisu ezingamahlalakhona, kanye ne-duodenum 12, sincishiswa kanye nesigamu size amahlandla amabili.
Amafutha obisi lwamabele anconyelwa ukuthatha isipuni esisodwa sedessert kathathu ngosuku, zombili ukwelashwa kanye nokuvimbela izilonda nokuguguleka kwesisu. Isilinganiso esivela ezimpandeni zesitshalo sikhonjiswa ikhathalogi yesisu.
Okuningi kusilonda esiswini
I-ubisi thistle ilusizo kakhulu kumanyikwe, ngoba inezimpawu ze-choleretic, diuretic, diaphoretic ne-laxative, ngenxa yalokho izinto eziyingozi zisuswa emzimbeni.
Ukufunwa kokukhishwa kobisi ekwelapheni i-pancreas kufakazelwa iqiniso lokuthi ukuncipha lesi sitshalo kuyingxenye yezidakamizwa ezinjengeKarsil neLeganol. Kepha ngasikhathi sinye, le mishanguzo ayisebenzi kangako kunobisi thistle utshani ngendlela yayo emsulwa (emisha noma emisiwe).
ISelenium, oyingxenye yesitshalo, iwusizo kakhulu kumanyikwe, njengoba ilawula ukusebenza kwayo, inezindawo ezinamandla zokulwa nokuvuvukala nezokuvikela. Kuyafakazelwa ukuthi ngosuku nje olulodwa, amalungiselelo ahlanganisa i-selenium angadambisa ukuvuvukala okwenziwe ekhaya kumanyikwe.
Kubalulekile! Ukwehluleka ukusebenza kwamanyikwe, ukukhipha i-insulin nokulawula ushukela wegazi, kuvame ukuholela ekwakhiweni kwesifo sikashukela. Ngakho-ke, kubalulekile ukugcina umsebenzi ojwayelekile we-pancreatic, ozosiza amalungiselelo obisi lwamakhandlela.
Ubisi thistle lwe-pancreatitis
Ukuthuthukiswa kwesifo esibizwa ngokuthi i-pancreatitis kuvame ukwenziwa ukwephulwa kokuphuma kwe-bile. Amalungiselelo e-thistle yobisi aqukethe ama-enymes asiza ukugaya amaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate asesiswini akwazi ukubuyisa nokukhulisa ukukhiqizwa kwe-bile kanye nokuphuma kwayo, kanye nokwenza ngokweqile i-lipid metabolism. Ngaphezu kwalokho, ubisi lwe-cholesterol lwehlisa i-cholesterol yegazi (nge-pancreatitis, ukugcwala kwe-cholesterol kudlula imikhawulo evunyelwe).
Ngemuva kwenyanga elashwa ngobisi lwamakhakhasi, amaphesenti ama-85 eziguli ezinepancreatitis abe nentuthuko elandelayo:
1. Ukwehla ngosayizi wesimila kumanyikwe.
2. Ukungathathi hlangothi noma ukuncishiswa kobuhlungu.
3. Isisindo senzuzo.
Kubalulekile! Ukukhishwa kotshwala obuvela ku-thistle yobisi lwe-pancreatitis kuyaphikiswa (kunconywa ukuthathwa okufana komhluzi nobisi thistle powder). Ngaphezu kwalokho, lapho kukhona ama-gallstones, imithamo yolungiselelo lwamakhambi obisi esigabeni sokuqala sokwelashwa kufanele incishiswe ngesigamu.
Okuningi Ngokuphathelene ne-Pancreatitis
Thistle lobisi lwangaphakathi
Isibindi somuntu omdala sivelisa ilitha elilodwa le-bile ngosuku olulodwa, enye ingxenye yaso iqoqana esigaxeni sendodana, kanti enye ingena emathunjini. Kungamathumbu ukuthi i-bile ibambe iqhaza kuyo yonke inqubo yokugaya ukudla, ngoba iphula futhi ithola amafutha, amavithamini ancibilikisa amafutha, kanye nosawoti we-calcium nezinye izinto nezinto. I-Bile ibalulekile kumathumbu, ngoba ivuselela i-peristalsis, inciphisa ukuvutshelwa, kanye nezinqubo zokunciphisa umzimba. Ukuntuleka kwe-bile kuholela ekuphazamiseni amathumbu.
Thistle ubisi kukhulisa ukukhiqizwa kwe-bile, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukugaya okuphelele kwamafutha, futhi, ngenxa yalokho, ukutholwa ngokuphelele kwamavithamini ancibilikayo.
Kubalulekile futhi ukuthi lesi sitshalo sihlanze amathumbu kusuka kunobuthi futhi sichithe imfucumfucu kubantu, silinganise inqubo yokugaya, sinciphise ukugcwala kwe-cholesterol futhi sisize ukungezwani komzimba.
Ubisi thistle ukuqunjelwa
Amalungiselelo wokubhaka ubisi (okuwukuthi, isidlo kanye nojusi okuvela kulesi sitshalo) kusebenze motility yamathumbu, eye yasetshenziswa ekwelapheni ukuqunjelwa (ngaphezu kwalokho, ubisi lwethosi lunomphumela omnene wokuxhuma).
Umphumela omuhle wesitshalo ekuhambeni kwe-dysbiosis nawo uyaphawulwa: amalungiselelo obisi lukakhambi enza ngokwejwayelekile kube ngokomzimba ukwanda kwe-metabolism.
Ukwelapha ukuqunjelwa, kunconywa ukuphuza ubisi lwethanga kathathu ngosuku ku-dosage yethisipuni elilodwa. Ukuze uthuthukise umphumela, kusetshenziswa uwoyela obisi lwe-thistle ngokufana nokudla okucetshiswe ngefreyimu eluhlaza.
Ubisi thistle kwemithambo ye-varicose
Ngemithambo ye-varicose, ebonakala ngokubonakala kwemithambo yesicabucabu esibhidlangayo, izinhlungu zomlenze nokukhathala okungamahlalakhona, itiye lembisi yobisi lizosiza.
Ngokwenza itiye, 1 tsp. imbewu (noma isidlo) sesitshalo sithululelwa ngengilazi eyodwa yamanzi abilayo. Itiye liniselwa imizuzu engu-15, lihlungiwe futhi lidakwe kumasipuni ashisayo. Kokubili ngezinhloso zokwelapha kanye ne-prophylactic, itiye elinjalo lidakwa kathathu ngosuku, ingilazi eyodwa ngayinye.
Leli thuluzi liqinisa uhlelo lwe-vascular, lihlanze igazi futhi libe nomphumela oluzuzisayo emzimbeni wonke.
Ekwelapheni imithambo ye-varicose, i-thistle yobisi ingasetshenziswa hhayi kuphela ngendlela yetiye, kepha futhi ngesimo se-tincture yotshwala, i-oyela noma i-powder, engezwa ekudleni.
Okuningi emithanjeni ye-varicose
I-ubisi thistle iqukethe i-zinc, i-magnesium, chromium, i-manganese ne-selenium, enikeza ama-pancreas ngokuhlanganiswa okugcwele kwe-insulin ye-hormone, eyenza inqubo yokulawula amazinga eglucose egazini.
Lesi sitshalo sekufakazelwe ukuthuthukisa ukusebenza kwesibindi ezigabeni zokuqala zesifo sikashukela. Ngakho-ke, isibindi (ikakhulukazi ebusuku) sikhiqiza i-leucogen, okuyinto evikelayo eguqula ibe ushukela, okudingeka ukulwa nesifo sikashukela futhi ikhulise ukumelana nalesi sifo esivamile namuhla.
Kepha! Kumele kukhunjulwe ukuthi i-thistle ayikwazi ukwelapha ngokuphelele isifo sikashukela i-mellitus. Lesi sitshalo (ikakhulukazi esikhipha kanye ne-oyili) sisetshenziswa njenge-sweetener yemvelo, ngenxa yokuthi okuhlushwa ushukela egazini kuncishiswa kakhulu.
Amafutha Thistle obisi aqukethe i-Vitamin E, i-lignans, amanoni acid, i-magnesium, kanye nama-flavonoids, okuthi uma ehlanganiswe asize umfutho wegazi ophansi.
Ngaphezu kwalokho, lezi zinto ezifanayo zithinta kahle izinhlelo zenhliziyo nokujikeleza kwegazi konke, okulandelayo:
cholesterol ephansi yegazi,
qinisa futhi wandise ukugqama kwezindonga zemithambo yegazi,
yenza inqubo ejwayelekile yokujiya kwegazi,
banciphise ingozi ye-thrombosis,
yehlisa imisipha yemithambo yegazi,
vimbela ukubonakala kwamathafa ayingozi e-atherosselotic ezindongeni zemithambo yegazi.
Njengoba wazi, ubuthi, buthelela esibindini, bunomthelela ekuqoqweni kwamaphawundi angeziwe. Indlela yokuphila yokuhlala nokudla okungenampilo, okuholela ekuphazamiseni umzimba, nayo inomthelela ekuzuzeni isisindo. I-ubisi thistle ihlanza ngokuphelele isibindi sobuthi, ivuselela amaseli wesibindi, ubuthi obukhangayo kanye nobuthi, obusiza hhayi kuphela ukunciphisa isisindo, kepha futhi nokwenza ngcono impilo yomzimba wonke.
Izinzuzo zokusebenzisa ubisi thistle ukunciphisa umzimba:
1. Ukungabi nabungozi kukakhisi wobisi, okuwumkhiqizo wemvelo ngokuphelele ongenazo izinto eziphikisayo.
2. Ivikela isibindi emiphumeleni eyingozi yama-radicals mahhala sibonga silymarin enamandla e-antioxidant.
3. Ukusheshiswa kwamaMetabolism.
4. Ukujwayelekile kwenqubo yokugaya ukudla: ukwenza isibonelo, ukuthuthukisa ukugaya kusiza ukunciphisa isisindo.
5. Ukuqinisa ukungatheleleki, okubaluleke kakhulu ekunciphiseni isisindo, ngoba ukuhlelwa kabusha komzimba kufaka ukwehla kokungazinzi komzimba.
6. Ukuqina kwesikhumba. Ngakho-ke, amavithamini e-B ne-Vitamin E anegalelo ekuvuseleleni kwesikhumba ngokusebenzisa amaseli. Ehlelweni lokwehliswa kwesisindo, kuvela ama-isikhumba, kuveza amamaki, okuyilungiselelo le-thistle yobisi kuzosiza ukugwema, ngenxa yokuthi isikhumba siba sihle futhi sithambe.
Ngenhloso yokunciphisa isisindo, kusetshenziswa uwoyela we-thistle yobisi, okufanele kubhekwe njengezindlela ezisizayo zokunciphisa isisindo, okunomthelela ekwandiseni ukwehla kwesisindo.
Okuningi ngokunciphisa umzimba
Amafutha acindezelwe yi-Cold iyindlela elula futhi esheshayo ye-pancreatitis. Kwenziwa ngaphandle kwezinsizakalo ezikhethekile, ngaphandle kwamathuluzi amancane okucindezela nokuqoqa uwoyela.
Kwanele ukufafaza imbewu yesitshalo ukuthola umkhiqizo ofanele ngesakhiwo esinemvelo nesenzo esisheshayo.
Kuphela yilawo ma-inflorescence lapho amacembe aluhlaza asezingeni asevele enza lukhuni kuwo okufanele asetshenziselwe ukudala uwoyela. Kukubo lapho ungathola khona imbewu. Inqubo yokwenza lukhuni yenzeka ngasekupheleni kwehlobo noma ekuqaleni kwekwindla, lapho isitshalo siyeka ukuqhakaza. Kungalesi sikhathi lapho i-inflorescence kufanele ikhululwe ezintweni ezingadingekile, bese iphuma imbewu eyomile kancane lukakhakhasi wobisi. Ngaphandle kwemishini eyengeziwe, ukufafaza ioyile kuzoba nzima impela.
Amafutha Thistle we-pancreatitis angathengwa kunoma yiliphi ikhemisi likhemisi. Kusetshenziswa izikhathi ezi-3 ngosuku, njalo ngaphambi kokudla. Akudlule imizuzu emi-5 phakathi kokuthatha umuthi nokudla ukuze izinto ezizuzisayo zikhombise ukusebenza okuphezulu.
Ubisi thistle powder for pancreatitis
Imbewu eyomile ingaba umhlabathi ibe ngufulawa. Ngasikhathi sinye, izakhiwo ezizuzisayo ngeke zishabalale: amavithamini nama-enzyme azohlala ekwakhiweni komhlaba. Amakhambi omisiwe agqitshwa kusetshenziswa ihabhu noma enye indlela elula esimeni sempuphu. Ingasetjenziswa njengesengezo sokudla, kodwana isetjenziswa ngcono ngendlela efanayo neoyili - kathathu ngelanga ngaphambi kokudla, okungcono ngaphambi kokudla okuyinhloko. Ukuze kube lula, i-powder iyangezwa eminye imikhiqizo noma ihlanzwa ngamanzi.
Ukwelashwa kwenqolobane yobisi kunomthelela omuhle ezimweni lapho kwenziwa khona ngokuya ngemiyalelo nezinkomba zikadokotela. Uma umuthi unqunywe ngasikhathi sinye ngamakhambi esintu, awukwazi ukwesaba - lokhu kuvumelekile, kepha kuphela ngemvume yongcweti.
Le nhlanganisela eyinkimbinkimbi izonikeza umphumela okhethekile.
Ngokwezinhlangano zezempilo nezwe lonke zokucwaninga, ukusetshenziswa kwama-tincture noma ama-powders walesi sitshalo kubangela ushintsho oluhle emaphesenti angama-85 emilandu, kufaka phakathi nokusiza ukubuyela emuva kanye nokuhoxa, kepha kuphela enkambeni yesifo esibi.
Ngokusebenzisa ubisi thistle, isikhathi sokwelashwa kwe-pancreatic pancreatitis sincishiswa cishe ingxenye yesithathu. Lokhu kungumphumela omuhle, ikakhulukazi uma ucabanga ukuthi ukwelashwa akudingi izindleko ezinkulu, ukuya esibhedlela noma izinqubo ezibuhlungu.
Ubisi thistle ngesikhathi sokukhulelwa
Thistle lobisi liqukethe izinto ezingama-400 ezisebenzayo, umthelela wazo ezinganeni ezingakafundisiswa ngokuphelele. Ngenxa yalesi sizathu, ngesikhathi sokukhulelwa, amalungiselelo athayi wobisi asetshenziswa kuphela ngokuya ngemiyalelo kadokotela, ozobala isilinganiso esifanele somuthi, anikeze uhlobo oluthile lokwelashwa futhi asungule isikhathi esifanele sokwamukelwa.
Thistle lobisi lubekelwe abesifazane abakhulelwe abane-toxicosis, okuhambisana nokuntuleka kokudla kanye nobuthakathaka obujwayelekile.
Ubisi thistle lwezingane
Kusetshenziswa amalungiselelo obisi lwamakhambi ekwelapheni lezi zifo ezilandelayo ezinganeni:
Thistle lobisi luqinisa amasosha omzimba, futhi ngenxa yalokho, uma kunesidingo, lungasetshenziswa njengeprophylactic.
Izinzuzo zobisi thistle izingane:
ukukhuphuka kokuqina kwamathumbu,
ubuncane benombolo yokuphambana kanye nemiphumela emibi,
amathuba okusebenzisa isikhathi eside,
ukuhambisana nezinye izinhlobo zokwelashwa,
uhla olubanzi lwe-pharmacodynamics.
1. Ukungabekezelelani komuntu ngamunye.
2. Izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu.
Ezinganeni ezisukela eminyakeni emithathu ubudala, thatha i-pharmacy version ye-thistle yobisi (isidlo) isigamu sesipuni kabili ngosuku ngesikhathi sokudla (isidlo singezwa ezitsheni ezingadingi ukwelashwa okushisa).
Ungalungisa i-decoction yembewu obisini, okuthelwa kuyo isipuni sezinto ezingavuthiwe engilazini yobisi olushisayo, khona-ke le ngxube ifakwe emlilweni futhi ilethwe ngamathumba. Umhluzi osuswe emlilweni ufakwa ebusuku, bese ekuseni ubila futhi. Umuthi uphuzwa enkomishini yekota izikhathi ezingama-3-4 ngosuku, ihora elilodwa ngemuva kokudla.